प्रतियोगिताले दक्ष खेलाडी उत्पादन गर्नेछः बस्नेत | Mechikali Daily
प्रतियोगिताले दक्ष खेलाडी उत्पादन गर्नेछः बस्नेत
Posted By: Mechi Kalion: ७ माघ २०७३, शुक्रबार ०५:११
मदन भण्डारी स्पोर्टस् ऐकेडेमी बुटवल उप–महानगरकमिटी बुटवलको आयोजनामा बुटवलमा दोस्रो बुटवल अन्तर मावि स्तरीय छात्र÷छात्रा पा“च हजार मिटर दौड प्रतियोगिता हु“दैछ । प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको ऐकेडेमीले जानकारी दिएको छ । नेपालमा दक्ष खेलाडी उत्पादन गर्ने प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागिएको हो । यसै सन्दर्भमा मदन भण्डारी स्पोर्टस् ऐकेडेमी बुटवल उप–महानगरकमिटीका अध्यक्ष विकासजंग बस्नेतस“ग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी
गत वर्षदेखि तपाईहरू यो प्रतियोगिता गर्दै आउनुभएको हो ? प्रतियोगिताको खास उद्देश्य के हो ?
हाम्रो संस्था नै खेलकूल कार्यक्रम गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको हो । खेलकूदलाई जीवनको अभिन्न अंग बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो । यसले आत्मियता बढाउ“छ , मित्रता कायम गर्छ, दक्ष खेलाडी उत्पादन गर्छ ।
प्रतियोगितामा कति खेलाडीहरूले भाग लि“दै छन् ?
प्रतियोगितामा अहिलेसम्म १ सय २५ जना प्रतिष्पर्धीले सहभागिता जनाएका छन् ।
यसलाई कुनै अभ्यास नै चाहि“दैन । सबै विद्यार्थीहरूले सहभागिता जनाउन सक्ने हु“दा यसलाई समावेश गरिएको हो ।
अरू विधाका प्रतियोगिता किन नराखिएको हो ?
ऐकेडेमीले आर्थिक तथा अन्य समस्याका बाबजुत पनि सबैलाई खेलप्रर्ति जागरूक गर्ने उद्देश्यले दौड प्रतियोगिताबाट आफ्नो खेल, खेलाडी अभियानलाई अग्रता दिइएको हो ।
यो प्रश्न जसले पनि सोध्ने गर्छन् । खेलस“ग सम्बन्धित व्यक्तित्वलाई ल्याएमा राम्रो हुने थियो । तर यो अहिलेको लागि सम्भव भएन । हामीले तुरून्त प्रतियोगिता आयोजना गर्ने निर्णय गरियो । समयको अभावले गर्दा धेरै खेलस“ग सम्बन्धित आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई स्थान दिन सकिएन । हामी यसप्रति क्षमाप्रार्थी छौं । हाल यो प्रतियोगिताको लागि पूर्व मन्त्री तथा नेकपा एमालेका प्रभावशाली युवा नेता महेश बस्नेतलाई प्रमुख अतिथि बनाउने निर्णय गरेका छौं ।
प्रतियोगिता कति बजेबाट सुरू हु“दैछ ?
बिहान ठीक सात ३० बजे बुटवल योगिकुटीमा प्रमुख अतिथिले रिबन काटेर उद्घाटन गर्नुहुन्छ । उद्घाटनपछि ट्राफिकचोकमा बिजेताखेलाडीहरूलाई पुरस्कार तथा सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ । उक्त समारोहमा प्रमुख अतिथि महेश बस्नेतले संबोधन गर्ने कार्यक्रम पनि छ ।
प्रतियोगितामा विजेता खेलाडीले कति पुरस्कार पाउ“छन् ?
प्रथम पुरस्कार छात्र÷छात्रा दुवैलाई ५ हजार ५ सय ५५, द्वितीय छात्र÷छात्रा दुवैलाई ३ हजार ३ सय ३३, तृतीय हुने छात्र÷छात्रा दुवैले २ हजार २ सय २२ रूपैया“ मेडल र प्रमाणपत्र पाउनेछन । हामीले प्रतियोगितामा सहभागी हुने सबै खेलाडीलाई प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था मिलाएका छौं । प्रतियोगितामा एउटै विद्यालयबाट प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुन सफल भए विद्यालयलाई पनि सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ । हामीले दीप बोर्डिङ स्कुलमा कक्षा ६ मा अध्ययनरत अपाङ्ग रुपा रौतारलाई पनि सम्मान गर्दैछौं ।
प्रतियोगिताको खर्च कसरी जुटाउनुभयो ?
आन्तरिक स्रोत र हाम्रा सहयोगी संघ संस्थाबाट हामीलाई सक्दो सहयोग भएको छ । त्यस्तै हाम्रो मुख्य प्रायोजक एक्सपर्ट एजुकेशन एण्ड भिजा सर्भिस बुटवल शाखा मुख्य प्रायोजक हो । एक्सपर्टले प्रतियोगितामा समावेश भएका खेलाडीहरू विदेश जान एक्सपर्टबाट प्रोसेस गरेमा प्रोसेस चार्ज १ लाख रूपैया“सम्म छुट दिने बताएको छ ।
प्रतियोगितामा राजनीतिक दलका नेताहरू आउछन कि आउदैनन् ?
ऐकेडेमीका केन्द्र, अञ्चल र जिल्ला स्तरका नेताहरू, पार्टीका जिल्ला तहका नेताहरू, विभिन्न संघ संस्था र अन्य पार्टीका नेताहरूलाई पनि आमन्त्रण गरिएको छ ।
खेलकूद नै जीवनको अभिन्न अंग हो । बाल्यकालदेखि नै सुरू हुने खेललाई हामीले युवा र वृद्ध अवस्थामा भुल्दै गएका छौं । यसको असर वृद्ध अवस्थामा पर्दैछ । हामी जुनसुकै शारीरिक अभ्यासलाई खेलको रूपमा परिभाषित गर्दछौं । खेल नै शारीरिक व्यायाम हो । हामीले कुनै पनि कार्य गर्दा व्यायाम हुन्छ । त्यसैले दौड पनि एक शारीरिक व्यायामका रूपमा हामीले लियौं र दोस्रो पटक प्रतियोगिताको आयोजना गरेका हौ । अन्त्यमा हाम्रो विचारलाई जनसमुदायसमक्ष पु¥याउनु हुने तपाई र तपाईको लोकप्रिय पत्रिका मेचीकाली दैनिकलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
प्रस्तुति प्रकाश आचार्य